दरमखोला माछा मीठो असला, प्रदूषणले कुरमा कसरी बस्ला ? - khabarpatro
दरमखोला माछा मीठो असला, प्रदूषणले कुरमा कसरी बस्ला ?
२७, जेठ २०७९
बागलुङ, २७ जेठ। राजेन्द्र विक पेशाले सवारी चालक हुन । जिपमा यात्रु बोकेर गन्तव्यतिर हुइँकिनु उनको दैनिकी हो । अपर्झट्को बिदा या यात्रु नपाइँदा भने विकलाई पनि फुर्सद मिल्छ । एकै दिनलाई भए पनि नियमित कामबाट उनि उम्कन पाउछन् ।
विक अहिले ३३ वर्षको भए। फुर्सदमा जहान परिवारलाई समय दिन्छन् । घरधन्दामा सघाउँछन् । यसबाहेक उनको एउटा पुरानो सौख छ, माछा मार्ने । समय निक्ल्यो कि, खोला धाइहाछन् उनि । उनि १०–११ वर्षको उमेरदेखि नै खोला आउजाउ गर्थे। माछा मार्न, पौडी खेल्न र बालुवा झिक्न साथीहरूसहित विक खोलामा पुगर्थे।
गलकोट नगरपालिका–९ मल्मस्थित उनको पुख्र्यौली घरछेउ भएर दरमखोला बग्छ । असला माछाले देशदेशावर चिनाएको दरमखोलामा विकका बुवा रतनले जाल खेलथे । माछा मारेरै उनले परिवारको गुजारा धान्थे । पछि राजेन्द्रले पनि बुवाबाट जाल हान्न सिके ।
“घरमा बुवाको जाल थियो, त्यसैबाट मैले पनि खोलामा जाल खेल्न सिके”, उनि विगततिर र्फकिए, “सानो छँदा हत्केला खेलेर पनि माछा छोपिन्थ्यो, भुक थाप्ने चलन पनि थियो ।” माछा मारेर बेचेको पैसाले आफूलाई चाहिने कापीकलम किन्ने गरेको राजेन्द्रले सम्झीए।
सानैदेखि खोला छेउछाउ हुर्केको भएर पनि होला उनलाई अहिले पनि समय मिल्दा दरमखोला पुग्न मन लागिहाल्छ । “मसँग आफ्नै जाल छ, फुर्सदमा अहिले पनि माछा मार्न जान्छु, तर पहिलेझैँ माछा पनि छैनन्, खोला पनि दूषित हुँदै गएको छ, त्यो देख्दा मन खिन्न हुन्छ”, विकले भने, “अहिले त माछा लुक्ने कुरमा डाइपर, प्लाष्टिक, लुगाफाटाका टुक्रा र सिसा भेटिन्छन् ।”
उनले सानोमा खोला छिर्दा जुन ढुङ्गाको कुरमा हात छिराए पनि माछा हात लाग्ने गरेको सुनाउए । अहिले भने स्थिति त्यस्तो छैन । दिनभर खोला चहारेर जाल हान्दा पनि माछा जालमा पर्दैनन् । माछा लुक्ने कुरमा फोहर भेटिने गरेको दुःखेसो पोखेर विकले मान्छेकै कारण माछा सङ्कटमा परेको दृष्टान्त राखे ।
मानिसले मरेका कुखुरासमेत खोलामा मिल्काउने गरेको उनले सुनाए । चिसो, सफा र बगिरहेको पानी मन पराउने असला माछा हराउँदै जानुमा मुख्य कारण खोला दूषित हुनुरहेको विकको तर्क छ । उनको भनाइमा स्थानीय गोम रानाले पनि ‘सही’ थपे । “असला माछाको मुख्य आहारा भनेको लेउ हो, अहिले ढुङ्गामा लेउ होइन, हिलो र फोहर जमेको भेटिन्छ”, रानाले भने, “जथाभावी गिट्टी, बालुवा झिक्ने, फोहर त्यहीँ फ्याँक्ने, खोला मासेर संरचना बनाउने गर्दा माछाको बासस्थान खल्बलिन पुग्यो, दूषित पानीले पनि माछालाई हुर्कन, बढ्न दिएन ।”
जलारीकै रुपमा लामो अनुभव बटुलेका रानाले दरमखोलाको असला माछा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । “विषादी हाल्ने, पासो थाप्ने र करेन्ट लगाउँदा पनि असला माछा घट्दै गएको छ”, उनले भने, “कुनै दिन दरमखोलाबाट असला माछा हराएर जान सक्ने खतरा छ ।”
स्थानीय तवरबाट माछाको अवैध शिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिए पनि लुकिछिपी माछा मार्ने गरिएको रानाले बताए । उनले जाल खेल्दा पहिलेझैँ माछा पर्न छाडेको सुनाए । “दरमखोलाको असला माछा मारेरै जीवन निर्वाह गर्ने परिवार थुप्रै थिए, अहिले माछाबाटै जीविका धान्छु भन्ने कोही पनि छैनन्, फाट्टफुट्ट गर्ने मात्र छन्”, रानाले भने ।
कुनै समय गलकोट–९ बाँस्खोला, गल्याङ–७ को बामिया, आँगाखेत–९ को काँडेबासलगायत दरमखोला आसपासका दर्जनौँ परिवार माछामा आश्रित थिए । असला माछा कम पाइन थालेपछि मूल्य पनि अकाशिएको छ । एक किलो आलो असला माछाको आन्द्राभुँडी फालेको रु ११ सयसम्म बिक्री हुने गरेको छ । सुकुटी पारेकोलाई प्रतिकिलो रु १० हजारसम्म भन्छन् । होटल, रेष्टुेरेन्टमा त अझ महँगो पर्छ ।
“खोलामा अहिले माछा नै छैन, केही वर्ष माछा मार्न रोक लगाउने हो भने संरक्षण हुनसक्छ”, उनले भने, “मान्छेकै लापरवाहीका कारण दरमखोलाको असला माछा सङ्कटमा परेको हो ।” गुरुङसँगै बामियाका युवा अहिले पनि जाल खेलेर माछा मार्छन् । कतिपय परिवारको मुख्य कमाइको स्रोतमा माछा नै पर्छ । दरमखोलाछेउ कृत्रिम तलाउमा ‘रेम्बो ट्राउट’सँगै असला माछाको व्यावसायिक पालन गर्दै आएका हुम थापाले असला माछालाई मासिनबाट जोगाउन स्थानीयस्तरमा सचेतना जगाउनुपर्ने बताए ।
“विष प्रयोग गर्ने, करेन्ट लगाएर माछा मार्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यसमा नगर र स्थानीय प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्छ”, थापाले भभे, “खासगरी खोला आसपासमा रहेका बस्ती र त्यहाँका युवाहरूलाई असला माछा संरक्षणको कुरा बुझाउनुपर्छ ।”
मनपरी हिसाबले शिकार हुने र खोलानालाको पर्यावरण पनि बिर्गदै गएमा रैथाने जातको असला माछा सधैँका लागि हराएर जाने उनको भनाइ छ । दरमखोला मात्रै नभएर यहाँका बडिगाड, ठेउलेलगायतका खोलानालामा पनि असला माछा सङ्कटमा छ । रेष्टुरेन्टमा व्यवसायीसमेत रहेका थापाले दरमखोलाको असला माछा ‘ब्राण्ड’जस्तो बनिसकेको बताए । होटल, रेष्टुरेन्टमा पनि असला माछाको परिकार ग्राहकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । दरखोलाको असला माछा विदेशमा समेत कोशेलीका रुपमा जान्छ ।
भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा.ऋषिराम सापकोटाले नदीनाला एवं प्राकृतिक जलाशयहरूमा माछा उत्पादन बढाउन स्याङ्जाको मिर्मिमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्रमार्फत काम भइरहेको बताए। “केन्द्रले नदीनालामा माछाका भुराहरू छाड्ने, खोला आसपासका बासिन्दालाई माछापालन व्यवसायका लागि सहायता गर्नेलगायतका काम गर्छ, बागलुङमा पनि हामी मिलेर काम गर्दैछौँ”, उनले भने ।
गलकोट नगरप्रमुख भरत शर्मा गरैले दरमखोलामा हुने गरेको माछाको अवैध सिकारलाई नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले स्थानीयसँग मिलेर रैथाने जातका माछाको संरक्षण योजना बनाइने बताए । “माछा मार्न खोलामा विष हाल्ने, करेन्ट लाउने, पासा थाप्ने जस्ता गतिविधि रोक्न प्रहरीलाई पनि निगरानी र कडाइ गर्न भन्छौँ”, उनले भने, “तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, जो वर्षौँदेखि माछाको व्यवसायसँग जोडिएका छन, ‍उनिहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्‍यो, खोलामा जथाभावी गर्न दिनुभएन ।”
मनिसलाई चाहिने प्रोटिनको भरपर्दो र सर्वोत्तम स्रोतका रुपमा असला माछालाई लिइन्छ । नेपालमा ६०० देखि तीन हजार ५०० मिटरको उचाइसम्म असला माछा पाइन्छ । स्वादिष्ट र गुणकारी असला माछालाई सङ्कटबाट नजोगाउने हो भने गायक वसन्त थापा र गायिका निता पुनमगरको गीतमा मात्र सीमित नबन्ला भन्न सकिन्न । रासस
प्रकाशित मिति :जेठ २७, २०७९ शुक्रवार - १४:३८:४९ बजे
किसानका समस्या सम्बोधनका लागि माग गर्दै संगठनले बुझायो ज्ञापनपत्र